जिबनशैली / स्वास्थ्य / यौन
तपाइँ हामि खानेकुरा खादा खासै ध्यान दिने गर्दैनौ। खालि पेटमा के खानु हुन्छा के खानु हुन्न हामि हेरेर खाने मान्छे सायद कम नै छौ होला। कहिले काही केहि खानेकुरा खाएपछि …
खानेकुरा मानब मात्र नभई हरेक जीव का लागि बाच्ने आधार हो तर यदि यहि खानेकुरा पनि समय अनुसार खान नजान्ने हो भने बिरामी हुने डर हुन्छ। हामीले खानु अघि विचार …
टाइट जीन्स लगाएर हिड्नु त आजकल फेशन नै भएको छ । सहर बजारमा मात्र नभएर हरेक ठाउमा टाइट जिन्स लगाएर युबतीहरु हिडेको देख्न सकिन्छ। आकर्षक देखिन र स्टाइलिश देखिने टाइट …
तपाइँ घर बाहिरको खानेकुरा कति खानुहुन्छ ? बिशेष गरि बाटोमा उभिएर खाने चनाचटपटे कति शौखिन हुनु हुन्छ ? समय समय मा पत्रिकामा बेरेर बेचिने चटपटे , पकौडा जस्ता खानेकुरा हरु …
हृदयघात हुनुभन्दा १ महिना अघि शरीरले दिन थाल्छ यस्ता संकेत, ध्यान दिनुहोस
हृदयघात अर्थात् हार्ट अट्याक बडो खतरनाक परिस्थिति हो। बेलैमा स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने हो भने यस्तो परिस्थिति आउन बाट जोगाउन सकिन्छ। हृदयघात सब्द सुन्दा नै डर लाग्ने जो कोहि लाइ पनि …
रात मा काम गर्नु स्वास्थ्य का लागि कति हानिकरक छ ? यो प्रश्न धेरैको मनमा हुन्छा होला। देशको दाजोमा अधिकांस बिदेशमा रोजगारमा जानेहरुले रातमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहनछ नै। …
हरेक मानिस रहेर बाच्न चाहन्छ। तपाइँ हाम्रो सरिरको अंगहरुले देखाउने प्रतिक्रिया हरुबाट हामि कति स्वस्थ छौ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै हामीले दैनिक गरिने पिसाबको रंग हेरेर पनि हाम्रो सरिरमा रोगको …
रक्सि खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ यो त भनिरहनुपर्ने कुरा हैन। हरकसैलाई चिकित्सक पनि रक्सि नखाने सल्लाह नै दिन्छन किनकि रक्सीले कलेजो खराब गर्ने गर्दछ। रक्सीले कलेजो कति सम्म खराब …
के तपाई दाँत किराले खाएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? खाना खादा दात दुखेर छट्पटाउनु हुन्छ यो आफ्नो दात संग आफै हैरान भैसक्नु भाको छ। दाँत किरा ले खानु साधारण कुरा भैसकेको …
सर्पले टोके घरमा तुरुन्तै अपनाउनुस यस्तो घरेलु उपचार
हाम्रो घर वरपर यस्तो सर्पहरु आउने गर्दछन। यस्ता सर्पहरुले आफुलाई खतरा भएको अवस्थामा डस्ने गर्दछन। आफ्नो घरबारी खेतबारी मा काम गर्दा यदि सर्पले टोकिहालेको तपाईंहरुले तुरुन्त यस्ता साबधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। …
तपाइँ हामीले बजारबाट ल्याई खाने कुनै पनि खानेकुरा र हरियो सब्जी तरकारी कति सुद्ध र स्वास्थ्य बर्धक हुने कुरा सबैलाई थाहा नै छ। विभिन्न रासायनिक मल र औषधी प्रयोग गरेर …
आँखा पाक्ने रोग फैलिदै , यस्ता छन् लक्षण ! यसरि बच्न सकिन्छ
अहिले नेपालमा आँखा पाक्ने रोग फैलिएको छ। मनसुन लागेसंगै भाइरस सक्रिय हुँदा मौसमी आँखा पाक्ने रोग फैलिएको आँखा विशेषज्ञहरु बताउछन। काठमान्डौ जस्ता जनसंख्या धेरै रहेका ठुला सहरमा छिटो आखा पाक्ने …
होस गर्नुस ! यस्तो बानीले मृगौला खत्तम हुन्छ
मृगौला हाम्रो सरिरको अति नै महत्वपुर्ण अंग हो , जानि नजानी हामीले आफ्नो मृगौलालाई असर पर्ने काम गरिरहेका हुन्छौ । हामीले गरेको कतिपय लापरबाहीका कारण मृगौला फेल सम्म हुने गर्दछ …
ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यो नेपालीको आमसमस्या हो । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय …
February 7, 2018 February 7, 2018 - LeaveaComment
स्वस्थ र राम्रो संबन्धको लागी जिबन मा यौन कृयाकलाप अति नै जरुरी छ । यौन कृयाकलाप हाम्रो शारिरिक मात्र हैन मानसिक आबस्यकता पनि हो । यौन चरमसुखका लागि ठूलो र …
स्वस्थ शरीरका लागि पानी अत्यावश्यक पेय पदार्थ हो । तर, पानीको मात्रा कति चाहिन्छ भन्नेबारे भने धेरै मानिस अनभिज्ञ छन् । शरीरमा जहिले पनि पानीको मात्रा सन्तुलित राख्नुपर्ने हुन्छ । …
यस्ता ७ व्यक्तिले भुलेर पनि खानुहुँदैन अनार, हेर्नुहोस
एजेन्सी : फलफुल खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिन्छ। तर केहि फलफुल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो हुन्छ। अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। सबै फलफुलले हरेक समयमा राम्रो मात्र गर्ने …
खेल / स्वास्थ्य / यौन
हाम्रो शरीरमा भएका दुई मृगौलाको काम भनेको शरीरमा भएका हानिकारक विषालु पदार्थहरूलाई छानेर पिसाबको मार्फत बाहिर फाल्नु हो। मृगौलाकै कारण हाम्रो शरीरमा रगतमा पानी, नुन तथा अन्य खनिजपदार्थलाई सन्तुलित बनाएर …
एजेन्सी । कति पटक यौनसम्पर्क राख्ने भन्ने कुराको कुनै नियम छैन । यो पूर्ण रुपले तपाईंको खुशीमा भरपर्छ । तर, यो विषयमा भएको एक अध्ययनमा केहि निश्कर्ष निकालिएको छ की …
बोलिचालीको भाषामा ‘ग्यास्ट्रिक’ भनिने ‘ग्यास्ट्राइटिस’लाई आमनेपालीको रोग मानिन्छ। कतिपयले ब्यंग्य गर्दै यसलाई नेपालीको राष्ट्रिय रोग समेत भन्ने गर्छन्। पहिले–पहिले ४० वर्षभन्दा माथिको उमेरमा देखिने ग्यास्ट्रिक हिजोआज जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा …